Booliska Dalka Ingiriiska oo baaraya dilka gabar soomaaliyeed oo la jar jaray.
Booliska dalkan ingiriiska ayaa helay maydka gabar soomaaliyeed oo lagu magacaabo Nasra ismaaciil oo 27sano jir ah oo maydkeedii laga helay kanaal mara woqooyiga London afar maalin kadib qiyaastii markii kanaalkaas laga helay boorso qaybo kamid ah jirka gabadhaas sida xun loo dilay.
Dilka gabadhan oo ka hor la sheegay in ay ku noolayd mudo bilooyin ah guri ku yaala xaafadda Kings Kross oo ka tirsan bartamaha London. waxaana gabadhaasi la baadi goobayay mudo bil ah.
Booliska londona waxaa ay su'aalo waydiinayaa sida ay ugu warameen warbaahinta dalkan nin 53 sano jir ah oo u dhashay ingiriiska iyadoo booliskuna ay sheegeen in ay rumaysan yihiin in dilkan uu dhacay labo maalin ka hor dadaalna ay ku bixinayaan sidii gacanta loogu soo dhigi lahaa cidii dilkan ka danbaysay.
Dilka Nasra Ismaaciil ayaa soomaalida ingiriisku ay aad uga naxeen iyaga oo ku tilmaamay fal danbiyeed fool xun oo lagula kacay gabadhaas iyadoo ay jiraan dhanka kalana sida ay iigu warameen soomaalida ku nool london dhowr qof oo dhaawacyo ay soo gaareen markii ay la kulmeen weerarada noocan oo kala ah.
Dalkan ingiriiska waxaa inta badan ka dhaca dilka loo gaysto gabdhaha ka hor inta aan la dilinna waxaa burcadda dilka gaysta ay ku dhaqaaqaan fara xumayn ay u gaystaan, waxaana qoysas badan oo kala jinsiyado duwan ay la yihiin caruurtooda.
Faafin: SomaliTalk.com | April 17, 2004
Marxuumka oo lagu magcaabi jirey Abuukar Sh Cabdi waxaa lagu diley...Guji 11/4/04
200 oo Qof oo Ka Qayb Galay Aaskii Marxuum Xasan M. Faarax
Seattle: Marxuumka oo asagoo wadey Taxi lagu diley magaalada Seattle, USA ayaa.. Guji.. Feb 1